Siddeed ku dhimatay dagaal Kismaayo - BBC Somali - Warar
Siddeed ku dhimatay dagaal Kismaayo
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 8 June, 2013, 12:19 GMT 15:19 SGA
Wararka ka imanaya magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose, ayaa sheegaya in dagaal culus maant uu ku dhexmaray kooxo hubeysan oo daacad u kala ah Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo Iftin Xasan.
Dagaalka maanta ayaa waxaa la isu adeegsnayay madaafiic iyo hub kale oo culculus, iyadoo boqolaal shacab ah ay ka baxsanayaan xaafadaha uu dagaalku saameyay. Goobaha dagaalada culus ay ka dhaceen ayaa waxaa ka mid ah dalcadda Via Afmadow oo ka tirsan xaafadda Calanleey.
Afhayeenka maamulka Kismaayo Cabdinaasir Seeraar ayaa BBCda u sheegay, inay amniga magaalada ay gacanta ku dhigeen isla markaana ay ka saareen magaalada koox xiriir la leh Alshabaab. Hase ahaatee dhanka kale afhayeen u hadlay Iftin Xasan, ayaa sheegay inay iska caabiyeen weerar gardarro ah oo saaka ay ku soo qaadeen kooxda raaskaambooni.
Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qasaaraha dagaalka maanta, hase ahaatee waxaa la xaqiijiyay dhimashada siddeed qof iyo dhaawaca ku dhawaad labaatan kale.